२० वर्षपछि खुल्यो भन्सार एजेन्टको आवेदन, ६६० जना माग – Gorkhali Dainik
April 2, 2021 418
काठमाडौँ – विगत २० वर्षदेखि खुला हुन नसकेको भन्सार एजेन्टको लागि अन्ततः आवेदन खुला भएको छ ।
भन्सार विभागले ६ सय ६० जना भन्सार एजेन्ट माग गर्दै आवेदन खुलाएको छ । चैत १६ गते अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागले अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट भन्सार एजेन्टको आवेदन खुला गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा सडकमा एउटा चितुवा’लाई डोर्याउँदै गरेको भि’डियो भाइर’ल भइरहेको छ । सुरक्षाकर्मी र स्थानियको भिडबीच एउटा चितुवालाई बाख्रालाई जस्तो डोर्या’एर हिडेको देखिन्छ । अचम्म लाग्दो यो भिडियो सार्वजनिक भएसंगै भाइरल भएको छ ।
चितुवालाई एक जना प्रहरीले समा’तेको देखिन्छ भने स्थानिय पनि संगसंगै हिडेको देखिन्छ । स्थानियहरु सेल्फी पनि खिचिरहेका छन् । त्यती धेरै मानिसको भिड’मा पनि चितुवा आनन्दले हिडेको देखिन्छ ।
घरपालुवा जनावर जस्तै मानिससंग संगै डोरिएर हिडेको छ । यी क्रियाकला’पहरु कैद भएको भिडि’यो फेसबुक, ट्वीटर, युट्युबलगायत सबैतिर चर्चाको केन्द्रमा छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडि’यो अनुसार यो घटना पर्वतकोहो । पर्वतको जलजला गाउँ’पालिका ७ स्थित लामागरामा सोमवार साँझ चितुवा देखिएको थियो ।
जंगल घाँस दाउरा गर्न गएका स्थानियले चितुवा देखेका थिए । प्रहरीलाई खबर गरेपछि जनप्रतिनिधि सहितको टोली पुग्यो । प्रहरीले चितुवालाई लामागराबाट बाख्राजस्तै डोर्‍याएर हिँडाउँदै मिलन’चोकस्थित प्रहरी चौकी पुर्‍याए।
सदरमुकाम कुश्माबाट सहायक वन अधिकृत रविआनन्द गोपालीको टिम गाडी लिएर मिलनचोक पुगेपछि मात्र चितुवा’लाई गाडीमा हालिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वत’का प्रहरी निरीक्षक मनिष श्रेष्ठका अनुसार लामागराबाट हिँडाएर चितुवालाई ३ किलोमिटर परको मिलनचोक प्रहरी चौकी लगिएको थियो । सार्वजनिक भएको भिडि’यो त्यतीबेलाकै हो । भिडि’यो हेर्नुहोस…..
Prevके तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन चाहनुहुन्छ ?
Nextफेरि सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा ! छिटो हेर्नुस
काठमाडौं उपत्यकाको आकाशमा तुवालो, यस्तो हुन सक्ने खतरा
ह्यामरले हि’र्काएर ह’त्या गरी बोरामा पोको पारेको अवस्थामा श’व फे’ला
दिपालाई छाडेर किन करिष्मा लिनु पर्यो मुद्रेको स्पष्टिकरण….!
भिर पाखामा डोजर चलाउने हिम्मतवाली युवतीलाई हेर्नुहोस् , चारै तिरबाट हण्डर खाएपछि यस्तो गर्दै (डोजर वाली)
बर्दियामा बाघको फेरि आ”क्र,म,णबाट पुलिसराम को मृ;त्यु (6881)